Qoyska saxafigii Sucuudigu sida xun u diley oo hadda leh waan cafinay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Qoyska saxafigii Sucuudigu sida xun u diley oo hadda leh waan cafinay
Saxafi Jamaal Khashowqi waxa sanad iyo badh lagu diley qunsuliyada Sucuudigu ku leeyahay Turkiga kadibna waxa jirkiisa loo jarjaray qurub qurub. Turkiga ayaa aaminsan in jirkiisa intaa kadib la raaciyay bulaacada.
Ciidanka wax baadha iyo sirdoonka ayaa markiiba ogaadey inayna laf ku gaareyn, wayse isku dayeen in bulaacad kasta ka raadiyaan. Intaas oo waxaas ay dhacayeen waxa jacaylkiisa u doonan ay ku sugeysay dibedda.
Waxay marka horeba u tageen qunsuliyada inay ka cusboonaysiiyaan baasaboorka kana qaataan warqadaha furiinka ee xaaskisii hore. Waxase lagu jarjaray isla qunsuliyada.
Sanad iyo badh kadib ayaa qoyskiisa sheegeen inay iska cafiyeen kuwii diley iyo kii soo amrey oo ah gacan ku dhiigle Maxamed bin Salmaan. Waxa hubaala in muddo kadib lagu heshiiyay cadadka lacagta ee la kala qaadanayo iyo jagooyinka la siin doonaa ayuu qabaa Xuseen Warsame.
”Bisha Ramadaan awgeed ayaa RABI uga hadhney waanan cafinay dilaagii aabahayo ayay ku yiraaheen qoraal ay soo dhigeen baraha bulshada.
Jacaylkiisii u doonanayd iyo dawlada Turkiga ee dalkeeda lagu diley ayaan iyagu diyaar u ahayn cafis ilaa gacanta laga soo geliyo gacan ku dhiigleyaasha dilka fuliyay.